Olee otú ndị na-ere ahịa n'èzí si aga nke ọma na China | Martech Zone
Olee otú ndị na-ere ahịa n'èzí na-aga nke ọma na China
Tọzdee, Febụwarị 23, 2017 Tọzdee, Febụwarị 23, 2017 Abhay Singhal
Na 2016, China bụ otu n'ime ahịa ndị dị mgbagwoju anya, nke na-adọrọ mmasị ma na-ejikọ ọnụ na ụwa, mana ka ụwa na-aga n'ihu na-ejikọ ọnụ, ohere dị na China nwere ike ịnweta maka ụlọ ọrụ mba ụwa. App Annie weputara na nso nso a akụkọ na mkpanaka mkpanaka, na-egosipụta China dịka otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala kachasị ukwuu na uto ngwa ahịa ngwa ahịa. Ka ọ dị ugbu a, Nchịkwa Cyberspace nke China nyere iwu na ụlọ ahịa ngwa ga-edebanye aha ya na gọọmentị iji lelee anya nke ọma maka ọdịnaya ndị ọrụ China.
Enwere ọtụtụ ozi agwakọtara na-ezigara ndị na-ere ahịa, ọ na-esikwa ike ịmata ụdị nsogbu ụlọ ọrụ ga-eche ihu na-achọ ịchọta ihe ịga nke ọma n'ahịa ndị China, mana ọ ga-ekwe omume - enwere m ike ịsị na site na ahụmịhe mbụ. Na 2012, mgbe ụlọ ọrụ m hụrụ ihe ịga nke ọma dịka onye ọkpụkpọ zuru ụwa ọnụ na mgbasa ozi mkpanaka, anyị ghọtara na ohere dị na China ekwesịghị ileghara anya. Iwulite ahia na-adigide na China choro ngbanwe nke uche na usoro atuputara nke oma nke na aghota nghota di nma nke teknuzu, ighota ihe mgbagwoju anya nke ahia di na mpaghara, ijiko ndi ozo nwere ahia ahia nke obodo, na inwe nkwanye ugwu nkwanye ugwu azụmahịa na-aga nke ọma.
Ghọta Marketing maka Market nke China
Ebe ndị egwuregwu bọọlụ zuru ụwa ọnụ dara na China, ndị dike ọchụnta ego bilitere na ịrị elu. Ọ dịịrị onye nọ na United States mfe ikwu na WeChat bụ Facebook copycat, mana n'eziokwu, ọ gbanweela ihe nyiwe mmekọrịta mmadụ nwere ike nweta site na nghọta na igbo mkpa pụrụ iche nke ahịa ndị China. Na ihe karịrị ọkara ijeri kwa ọnwa ndị na-arụ ọrụ kwa ọnwa na Chile, WeChat's enweghi ihe ịga nke ọma na China si na imeghari ngwaahịa ya karie netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta iji gụnye ọrụ ndị ọzọ iji tinyekwuo ọnụ na ndị ọrụ ndụ. Njirimara nke nwere ike iyi ihe efu dika ịkwụ ụgwọ ego bara uru na-enye WeChat aka ịmata ọdịiche dị na ndị isi mba ọzọ, ndị na-asọmpi ụlọ ma na-agbakwụnye ezigbo uru nke ọtụtụ narị nde ndị ọrụ WeChat. Ndị na-ere ahịa ọdịda anyanwụ nwere uru nke inwe ike ịba ụba na netwọkụ mmekọrịta ọha na eze, netwọkụ dịka WeChat chọrọ ịba ụba na mkparịta ụka otu n'otu ma ọ bụ obere.
eMarketer na-ebu amụma na mgbasa ozi dijitalụ ga-aga karịa $ 80 ijeri na China site na 2020, Ahịa ndị China nwere ike ọ gaghị eche echiche zuru oke gbasara mgbasa ozi ala na ahịa ndị China. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ala ndị China nwere ike ịdịtụ iche karịa ka ha dị na US, ebe a na InMobi anyị hụrụ na China nwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị onwe ha na 2016.
Mmekọrịta maka Successga nke Ọma
Mkpakọrịta nwere ike iyi ka ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nwee ihe ịga nke ọma nyere mgbidi China megide azụmaahịa na ndị ọchụnta ego mba ọzọ; ọ nwere ike isi ike ijikọ nzukọ abụọ si mba ọzọ ma rụọ ọrụ n'otu ebumnuche. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọta ụzọ ndị ọzọ iji soro onye ha na ha na-arụkọ ọrụ rụọ ọrụ iji gboo mkpa China, dịka ahịa anaghị egbo mkpa otu-size dabara-niile ndị na-ege ntị.
Otu nhọrọ bụ mmekorita rụrụ arụ na ụlọ ọrụ nwere nka obodo. Ọ dị mkpa maka ndị na-ere ahịa, ọkachasị ndị US, icheta na China nwere ọtụtụ mpaghara dị iche iche nwere ihe karịrị asụsụ 200 a na-asụ na mba ahụ. Ihe ịma aka nke ndị na-esite n'èzí na-eche ihu bụ na ụlọ ọrụ ndị na-anwa ịbanye n'ime obodo ga-enwe ọtụtụ onyinye na-enyefe maka ọrụ gị. N'oge ọzọ, a ga-ahụta ụlọ ọrụ ndị a dị ka ndị asọmpi, mana China nabatara nkwado. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ile ndị ọrụ ntanetị dị ka Baidu, Alibaba na Tencent anya dị ka asọmpi, enwere ọtụtụ ohere iji mekọrịta ma jikọta ike iji mee ka mmekọrịta bara uru. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ịntanetị nke China achọpụtala na ọ na-esiri ha ike ịga nke ọma n'ahịa ịntanetị zuru ụwa ọnụ, mana nke a bụ ebe mmekọrịta na ndị egwuregwu siri ike n'ụwa nwere ike inyere aka ịkwaga agịga ahụ.
Ndepụta na-enye mgbanye dị iche na ịmekọrịta na ahịa ndị China. Kama ịga na isi na ụlọ ọrụ mpaghara, Priceline mere mkpebi siri ike itinye ego karịrị $ 1 ​​ijeri na ụlọ ọrụ ndị China gụnyere Ctrip, Baidu, na Qunar. Nke a dugara na mmekọrịta mmekọrịta ebe Priceline na-enye ọtụtụ akụrụngwa nke ụlọ oriri na nkwari akụ maka ndị ọrụ China na-ede akwụkwọ site na Ctrip, na-eduga na uru ahịa ntinye akwụkwọ maka Priceline.
Chọpụta ebe ma gbasaa
Mpaghara azụmahịa na China chọrọ ngbanwe n'uche. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịdị njikere iji wuo otu mpaghara zuru oke, weghachite ọdịnala ụlọ ọrụ iji kwekọọ na nke mpaghara mpaghara na ịme mkpebi.
O nwere ike ime ka obi ghara iru gị ala na mbido; ìgwè dị iche iche mụtara ịtụkwasị obi ma nyere ibe ha aka oge na-aga. Inye ndị na-asụ Bekee na-ekpughere ụwa niile na-enyere aka igbochi ọdịiche ọdịbendị ma belata usoro nke ijikọ otu ndị otu China na ụlọ ọrụ ụwa. Site na ịchọta otu otu na China, ndị na-ere ahịa ga-enwe nghọta miri emi banyere nuances ọdịbendị nke ga-eme ọdịiche niile. N'elu inwe nghọta nke oge kachasị elu iji kwụsị ndị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya maka ndị na-ere ahịa ka ha jiri ụbọchị November nke Singles, bụ nke hụrụ nde $ 17.8 na-ere ahịa na 2016 karịa ka ọ ga-elekwasị anya na mgbasa ozi gburugburu Christmas.
N'iburu ọnụego nke teknụzụ na-agbanwe, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na a ga-enwe ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku, nke ụlọ ọrụ na afọ ndị na-abịanụ na-achọ mgbasawanye na China. Ndị ụlọ ọrụ na-anọgide na-ekwesi olu ike ịnakwere nguzo nke mmekọrịta, ịdị ike na inweta nghọta miri emi banyere ahịa na ụdị ahịa azụmahịa, ga-aga n'ihu na-akụchi ụzọ n'okporo ụzọ iji nwee ihe ịga nke ọma. Dịka ilu ndị China a ma ama na-ekwu:
Atụla egwu itolite nwayọ, tụọ egwu iguzo.
Tags: mgbasa ozi chinaBaiduchinaChinaCtriponye na -emepụta ihemarketingahia na Chinan'ebe ọwụwa anyanwụọnụahịaỌnwawechat
Abhay bu onye nchoputa na CRO nke InMobi. Abhay na-ekwu okwu ụwa niile gbasara achụmnta ego, ndị mmadụ, na ọdịbendị ma bụrụkwa ihe nyere aka inweta InMobi nnabata dịka ụlọ ọrụ 50 Kachasị ruplọ ọrụ na ụwa site na MIT Technology Review, Mpụpụta mmalite nke afọ site na Forbes na ọtụtụ ndị ọzọ. Hụnanya ya maka ihe ọhụrụ mere ka ọ gaa India Institute of Technology, Kanpur (IIT) maka ụmụ akwụkwọ ya ebe 2013 nọ kwanyere ya ugwu 'Distinguished Alumnus Award' maka ezigbo ọrụ ya.
Youtube Marketing: Gini mere o gha adighi!